Ifaan MidAmerica Energy Power guyyaa har’aa Sioux City keessati dhiibba uume jira. Dubataan MidAmerican akka jedhetti gama isaatin tajaajila kan kennuu jalqabe ganama seati 10:53 irraayi maamiltoota 1,477 kan kenneedha. Maamiltooni ganama seati 2 p.m irraa Unity Point Health-St. Lukes dhiiba akka godhan yaalu turuu qaban. Post Facebook, ambulance gara biraatti jijjiiranis generators eegumsa akka fayyadamuu jiraniifi “eegumsi dhukubsatoota akka haala bareeda irra jiru himan”.
Jaallalen baratu University Iowa kan tae tokko isaan bara 2018 keessa ukkaamfamte san booda kan cuuben ajjeefamtee akka quba hin qabne wayta san dalagaaf akka biyyaa bahe dua isiitif onneen isaa akka cabde himan. Dalton Jack, jaallale yeroo dheera Mollie Tibbetts kan turee fi inii qulfiidhas warraa raga jalqabaa achiitti argame gafaa ajechaan tokkofa ittii murtahu Cristhian Bahena Rivera, kaa Mexican national murtii ajechaaTibbetts wajjin.
Bakka cinaa barattoota Gov. Kim Reynolds qophii state charter school babal’achuu irrati guyyaa harbaa walii malatteesani jiran. Seerri character school haarawa kan Iowa keessa haarawa baase, gareen qaxitaa gara state Deparmanti Education form center tti akka guutan himan hanga local school board approved godhatanitti.
Repablikaani fi Senatiini mana Iowas keessaa haraa ejjanoo jalqabaa fudhattanii jirrani kaa garaa amending Iowa constitution waa’ee mirgaa egumsaa ulfaa garaa basuu hin egaamne. Warri senataa har’aa mirgaa kennaniif, warii mana amoo kalle galgalla hayaaman. Umanni Demokratii amoo akaa jedhatii mirgaa dubartottaa waraqaa irrati basuu seraa miiti.
Qonnaan bultoonni warra nyaata hin qabneef nyaata kan USDA deegaramu dha , drive-thru dhaan nyaanni kennamu bor ganama seati 10 a.m irraa bakka parki Sunnybrook Community Church, 5601 Sunnybrook Drive kan kennamuudha. Qonnaan bultooni lamaffaan nyaata kan kennan bakka Sunnybrook Church seati 10 a.m May 27 kan kennamu ta’a.